Valheim: ichaburitswa muna Kukadzi 2 yeLinux uye iwe unogona kutoona preview | Linux Vakapindwa muropa
Valheim kubva Iron Gate AB ichaenda muKutanga Kuwana uye ichave neLinux neWindows rutsigiro kutanga Kukadzi 2. Kupona kwevakawanda uye kuongorora mutambo wevhidhiyo mune yakavhurika nyika kuti unakirwe zvizere nezvose zvaunogona kuwana uye neiyo Viking tsika pane ino zita.
Iwe unogona kurwa, kukunda, uye kuongorora. Muchidimbu, zvese izvo iwe zvaunoda zvakanyanya nezve izvi zvakavhurika nyika uye kupona mitambo yemavhidhiyo. Asi ine chimwe chinhuzve, sezvo vavaki vayo vaita imwe pfungwa inovasiyanisa kubva kune mimwe mitambo yakafanana.
Zvimwe features izvo zvakare zvinomira kunze kweiyi Valheim vhidhiyo mutambo ndeiyi:
Hukuru nyika yakavhurika Mauri iwe waunogona kuongorora nekugara munzvimbo zhinji, kubva kumasango asingazivikanwe kusvika kune anoremedza makomo akafukidzwa nesinou, achipfuura nemumigwagwa inopenya, nezvisikwa zvine mukurumbira zvekurwa nazvo, mhuka dzesango dzekuvhima nekupa chikafu, nezvimwe.
Multiplayer maitiro mushandira pamwe kuitira kuti vamwe vakwanise kukubatsira uye kuva vabatsiri vako kupokana nemupikisi wako. Kuwedzera, Valheim inotsigira yakamira maseva anotambirwa nevatambi ivo pachavo.
Mhando dzakasiyana dze armas zvaunazvo.
Kugona kuvakwa kwezvivakwa, kufamba nechikepe uye kukwasva, ngarava, nezvimwe. Zvese kuti uwane nzvimbo dziri kure nemakungwa.
Kurwa uye kupokana ngano uye ngano zvisikwa, tora mikombe hondo, gadzira zvinhu zvitsva, nezvimwe.
Kuchinja-chinja kugadzira dzimba nezvivakwa zvakasiyana siyana. Uye zvakare, izvo zvinokutendera iwe kuti ugadzire mapurazi, kugadzira nzvimbo dzezvombo nezvombo, nzvimbo dzekugadzira chikafu uye mead, nezvimwe.
Kana iwe uchifarira, iwe unofanirwa kuziva kuti mushure mematambudziko ekutanga eValheim, zvinoita sekunge kuchave nekuwana kwekutanga uye kuti zvichave zvakare yeLinux.
Y kana uchifarira, unogona kupinda mu nzvimbo yekupisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Valheim: inotangisa Kukadzi 2 yeLinux
leticia suarez akadaro
ndinofunga ndinoda nyaya yaValheim
Pindura Leticia Suarez